Dharaaro Xusuustood: Prof. Maxamed Siciid Gees Qaybtii 27 aad. | Hangool News	Home
Hangoolnews.com Dharaaro Xusuustood: Prof. Maxamed Siciid Gees Qaybtii 27 aad.
Waqtigii ay socotay fadeexaddii gabadhii tababarka ku qaadanaysay Aqalka Cad ee Madaxtooyada Maraykanka, Maria Lewinsky ee lagu eedeeyey inuu fara-xummeeyey Madaxweynihii Maraykanka ee Bill Clinton, ayaa Madaxweyne Cigaal kaftan ku soo qaaday shirkii Golaha Wasiirrada oo yidhi; “Aniga oo u dhaarsan Joornaalka Jamhuuriya ayaan furaa TV-iiga ee CNN-ta, markaas ayaan arkaa isaga oo ka faaloonaya alaabadii Madaxweyne Clinton, markaas ayaan candhoofadayda dib u laqaa oo arkaa rag waxa haysta.” Waqtigaas Joornaalka Jamhuuriya ayuunbaa dalka ka soo bixi jiray. Xukuumadda Marxuun Cigaal ugama dulqaad badnayn saxaafadda xukuumadihii ka dambeeyey, haseyeeshee laba dhacdo oo xilligaas dhacay ayaa soo jiitay indhaha dadka xiiseeya Arrimaha Somaliland: Madbacaddii NPP ee uu lahaa Marxuun Maxamed Cabdi Shidde Aabbihii asaasihii saxaafadda madaxabannaan ee cusub ee Somaliland oo iyadu lahayd Joornaalka Jamhuuriya, ayaa waxay bakhaar kaga jirtay daarta timacadde ee dawladdu leedahay oo madbacaddu u tiilay.
Xukuumaddii Marxuun Cigaal ayaa mashruuc sharci oo ku saabsan saxaafadda u gudbisay Golaha Wakiiladda. Golahii oo uu Marxuum Qaybe iyo Oday Cilmi iyo Cabdulqaadir Jirde ka yihiin Shirguddoonka ayaa ku soo celiyey xukuumadda mashruuci sharci.
Akhristaw labada ifafaale waxay muujinayeen sida ay u kala madax bannaan yihiin Waaxaha Qaranku, haddii lagu dedaalo oo mid weliba kaalinta ay qaranka kaga jirto ay qabsan karto.
Bal aan dheehanno arrimahaaas la isku qabto waxa uu ka leeyahay Dastuurka Somaliland.